Home https://isimbido.tv/silver-oak-casino-mobile-bonus-codes/ morongo casino hotel
President Muhammadu Buhari ga-adị akụkụ nke ọ bụla na-akwadoghị-eme ihe, na-Presidency kwuru taa, na onhya mmeghachi omume mgbalị ụfọdụ na ndọrọ ndọrọ ọchịchị-eme ihe nkiri na-ejikọta ya na mkpughe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ejije na Domwande ala.
On Monday, asatọ ndị so Domwande Assembly egwu na-amalite impeachment obodo megide Governor Samuel Ortom, onye urua mere n’ezi ofufe dapụ site ịmafe na ndọrọ ndọrọ ọchịchị ịkwado si All progressives Congress na Peoples Democratic Party, tinyere 22 òtù nke ala nzuko omeiwu Liberia.
Dị ka ihe nkiri nke na mgba okpuru na-egwuri si, ọkà okwu Terkimbir Ikyange wepuru na ochichi na mgbe e mesịrị kwụsịtụrụ. A họpụtara onye na-ekwu okwu oge oge. Ọkà okwu ahụ kwụsịrị na Monday na-akpọsa mmalite nke impeachment na-aga megide Ortom.
N’okwu a na-agba agba, Aso Rock na sepu Buhari site na ihe nkiri dum.
“President Buhari ga-adị akụkụ nke ọ bụla na-akwadoghị-eme ihe, na ihe ọ bụla iji na-ejikọta ya na daa ọdịda ihere gara aga, mgbe nta ọnụ ọgụgụ nke omeiwu impeached gọvanọ, gaghị arapara”, kwuru, sị Femi Adesina media ndụmọdụ.
“Ọ ga-adị ka mmiri si azụ azụ. Ndị na-emeghe uche maara nke a, mana ndị na-eme ihe ọjọọ ga-ewepụta ihe ọ bụla nye Onyeisi. Ọ bụ Ndụ Ọjọọ n’ala na nke ha na-ugbu a marooned, dị ka fallout nke Nyocha ha iguzogide ịgbanwe na mba “.
Ndi ochichi ndi ochichi kwuru na Nkume Nkume nwere ike ikwu okwu na nkwuputa nkwuputala onye isi oche ndi otu Senate Bukola Saraki na onye isi okwu James Dogara, ndi otu n’ime ha na-abanye aka na ndi isi ochichi nile nke PDP.
Onye duo kpebiri na mgbochi ndị uweojii nke Ụlọ Mgbakọ State wee kpọọ President Buhari ka ọ kpọọ ndị uweojii ka ha nye iwu.
Ndị omeiwu abụọ ahụ kwuru, sị: “Ọnọdụ dị na State of Assembly nwere nnukwu ihe ọ pụtara maka oge ọchịchị aka ike na mba anyị. Ọ na-egosipụtakwa otú esi eme ka ndị uweojii na-ahụ maka ndị uweojii na-ahụ maka njedebe ọchịchị. N’okwu a na nso nso a, ndị isi isi na-ezo aka na oge n’oge gara aga ebe a na-eji ọnụ ọgụgụ dị nta nke ndị omeiwu na-emeri ndị gọvanọ bụ ndị jikọrọ ya na Federal Federal. Ihe anyị na-ahụ na Benue ugbu a bụ nloghachi n’oge ahụ dị egwu.
“Anyị kwenyere na a ghaghị ikpebi onye ọchịchị Gọvanọ Samuel Ortom nke a na-akwadoghi na iwu na-akwadoghị iji ndị ọchịchị na-ahụ maka ochichi onye kwuo uche ya, n’ụlọ na ná mba ọzọ. Anyị na-akpọ President Muhammadu Buhari ịkpọ ndị uweojii ka ha nye iwu ma gbochie nkwụsị nke iwu na iwu. Anyị na-akpọkwa ndị enyi nke Nigeria na mba ụwa ka ha na-agba ụda olu ha na-ekwenye na mmegide iwu na omume ndị nwere ike imebi ọchịchị anyị. ”
“Mgbe o ruru ha ala, ha na-akpọku Onyeisi ahụ ka ọ ghara itinye aka na nchịkwa na ọnọdụ obodo.
Ndị isi obodo ahụ gbaghaara azụ.
Adesina kọwara mmeghachi omume dị ka mkparịta ụka, karịsịa site na mgbalị iji dọba President Buhari n’ime ya.
“Nke a bụ ihe na-adịghị mma, ọ na-esite n’aka ndị na-etinye obi na-akwado ndị mmadụ ka ha ghara ime ka mba dị ọcha, nakwa otú anyị si eme ihe. Ha na-ahọrọ azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ ”
“Onye isi Buhari ga-eguzosi ike mgbe nile site na ihe niile dị mma ma dị mma, ọ ga-ajụkwa mgbalị iji dọba ya n’ime mkparị. Ndị na-etinye ọkụ site na mkpochapụ ma ọ bụ ọrụ, ma kpọchaa onyeisi oche ahụ ka ha bịa ma chọpụta na ọ bụ Iwu ahụ ga-eduzi President a n’oge ọ bụla, n’agbanyeghị mbọ iji tinye ya n’arụmụka na-enweghị isi. ”
GUO NKWUPUTA ZURU EZU NKE ONYE OZI:
Ọbụna mgbe ị na-aga nnọkọ ECOWAS / ECCAS na Togo, a na-eme mgbalị iji dọrọ President Muhammadu Buhari ka ọ bụrụ ihe nkiri na-emeghe n’etiti ndị isi na ndị ome iwu na mba Benue.
Okwu ndị otu agbụrụ dị iche iche nyerela okwu, na-ekwenye na President nwere ike inwe aka na mmepe na Benue.
Nke a bụ ihe kachasị njọ, ọ na-esite n’aka ndị na-atụsi anya ike na-etinye ndị mmadụ aka megide mba dị ọcha, nakwa otú anyị si eme ihe. Ha na-ahọrọ azụmahịa dị ka ọ dị na mbụ.
Onye isi bu Buhari agaghi enwe ike ime ihe obula n’emeghi ihe o bula, na ihe obula iji gbakwunye ya na oge gara aga, mgbe ndi nlekota ndi mmadu na-achikota ndi ochichi, agagh adi. Ọ ga-adị ka mmiri si azụ azụ. Ndị na-emeghe uche maara nke a, mana ndị na-eme ihe ọjọọ ga-ewepụta ihe ọ bụla nye Onyeisi. Ọ bụ ala na-egbuke egbuke nke ha na-eme ugbu a, dị ka ihe mgbagha nke nkwụsị ha na-agbanwe ná mba ahụ.
Mgbe o ruru ha ala, ha na-akpọku Onyeisi ahụ ka ọ ghara itinye aka na njedebe na ọnọdụ na steeti.
Onye isi bu Buhari ga-eguzosi ike mgbe nile site na ihe nile di nma na onye ezi uche, ma ha ga-ajụ mgbalị iji dọba ya n’ime mkparị. Ndị na-etinye ọkụ site na mkpochapu ma ọ bụ ọrụ, ma kpọọzie President ahụ Iwu mgbe niile, n’agbanyeghị mbọ iji tinye ya n’arụmụka na-enweghị isi.
Tags: BuhariihenemeihenemenobodoIsimbidoisimbido tvisimbidopostISIMBIDOPOSTSISIMBIDOTVLATESTnewnobodoPOLITICSpostposts